DAAWO: Maamulka Puntland Oo sheegay in ay xirayaan warbaahin caan ah, oo qortay warbixino Xasaasi ah. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO: Maamulka Puntland Oo sheegay in ay xirayaan warbaahin caan ah, oo qortay warbixino Xasaasi ah.
DAAWO: Maamulka Puntland Oo sheegay in ay xirayaan warbaahin caan ah, oo qortay warbixino Xasaasi ah.
September 2, 2019 Ali Osman Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 0
Wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Col, Cali Sabareey oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay amar kusiiyeen shirkadaha Isgaarsiinta ee ka jira deegaanadaas in ay hawada ka saaraan oo ay khadkooda internetka ka mamnuucaan mareegta-ta Puntlandtimes.com oo kamid ah websiyada wax ka qora arrimaha Puntland.
Wasiirka ayaa sheegin sababta rasmiga ah ee ay talaabadan u qaadeen, balse warar soo baxaya ayaa sheegaya in uu maamulkaas dhibsaday warbixin la xariirta arrimaha musuqmaasuqa oo lagu qoray mareegtan,gaar ahaana wasaaradda Warfaafinta oo ay gadood sameyeen shaqaaluhu.
Ma jirto wax wado sharci ah oo loo maray talaabada ay qaadayso Puntland ee ku wajahan xanibaadda website-kan, taas oo ka dhigan in xoriyada hadalka la diidan yahay.
Tifaftiraha guud ee warbaahinta Puntlandtimes Faarax Cabdulqaadir oo aan la hadalnay ayaa sheegay in aysan jirin wax war ah oo ay ka hayeen arrimahan, wuxuuna sheegay in wararka maalinlaha ee latabiyaa ay yihiin kuwa la hubiyey, isagoo ku tilmaamay talaabadan mid ka soo horjeeda sharciga Saxaafadda iyo xoriyadda hadalka.
“ Talaabada Puntland ay qaadayso waxay sharaf darro iyo jabin cad ku tahay dastuurka iyo xeerarka Xoriyada hadalka, waxaanu marnay wadada sharciga ah oo aanu maxkamad rasmi ah ka dacweynay maamulka Puntland, taas oo aan rajeynayo in ay u hogaansami doonaan” ayuu yiri Tifaftirahan.
Sidaas oo kale muuqaal ay warbaahintaas kaga jawaabtay talaabada Puntland ayaa lagu sheegay in aysan ka weecan doonin in ay xaqiiqada baahiyaan.
Warar ka madax banaan labada dhinac oo ay ogaatay MarqaanNEWS ayaa sheegay in mareegtan ay qortay xog la xariirta diyaarad waday Saanad ciidan oo ka dagtay magaalada Qardho, taas oo ay beenisay Puntland ayna sheegtay in ay tahay mid aan waxba ka jirin.
Somaliland:- Shaqaale shaqadoodi ku waayay khaad iyo sigaar ay isticmaaleen.
DAAWO VIDEO:Yaab Albaab Qabiil Sanbaloshe Labada Kuriya Puntland Iyo Galmudug,Dhibaatada Muqdisho